Raila Odinga iyo Wefti Uu Hogaaminayo oo Booqasho Ku Imanaya Somaliland | Gabiley News Online
Ra’iisal wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa inay booqasho ku yimaadaan Somaliland, sida ay Warbaahinta Hargeisapress.com u xaqiijiyeen ilo xogogaal ahi.
Raila Odinga ayaa wada olole baarlamaanka Kenya lagu horgeynayo mooshin lagu taageerayo qaddiyada Somaliland.
Raila Odinga ayaa aaminsan in Somaliland ay mudan tahay in loo aqoonsado dal madaxbanaan maadaama uu ku doodayo inay soo buuxisay shuruudihii looga baahnaa, ayna tahay meel doorasho dimuqraadi ah ay ka dhaceen seddax goor.
Todobaad kahor ayaa magaalada Hargeysa waxaa booqday xildhibaano, siyaasiyiin, maalgashadayaal iyo xubno kale oo muhiim ah oo ka tirsan xisbiga Raila Odinga, kuwaasi oo Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kala hadlay arrimaha ganacsiga iyo siyaasadda.
Waftigaasi ayaa waxay Madaxwaynaha Somaliland soo gaadhsiiyeen Salaan ay uga sideen Madaxwaynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta.
Imaatinka waftiguna waxa uu daba socday waftiyo dhowr ah oo labadii sanno ee u danbeeyay ay is dhaafsanayeen labada waddan, ujeedkooduna ahaa xoojinta xidhiidhka iyo iskaashiga labada waddan ka dhaxeeya ee dhinaca siyaasada, ganacsiga iyo arrimaha geeska.